I-Google Adsense yokuKhangela: Iziphumo zoSetyenziso kwiWordPress | Martech Zone
I-Adsense kaGoogle yoKhangelo: Shumeka Iziphumo kwiWindowsPress
NgoMvulo, Septemba 4, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngelixa bendisenza umsebenzi omninzi wetemplate kwiWordPress kule mpelaveki, ndibone inqaku malunga nokushumeka iAddsense yakho kaGoogle kwiziphumo zoKhangelo kwiphepha lakho leZiphumo zokuKhangela. Oku kulula kakhulu ukuba unayo iwebhusayithi emileyo, kodwa ukusebenza ngaphakathi kweWindowsPress kunzima ngakumbi. Ngombulelo, uGoogle wenze umsebenzi omninzi (njengesiqhelo) ngokubhala izikripthi ezicocekileyo zokufaka iziphumo.
Ndimane ndihlela itemplate yam "Ikhasi" kwaye ndafaka ikhowudi efunwa nguGoogle kwiphepha lokufika. Ndineziphumo zokukhangela ezithunyelwe kwiphepha lam lokukhangela (https://martech.zone/search). Emva koko, ndihlaziye iphepha lam lokuKhangela kunye nefom yokukhangela (kunye nolunye uhlengahlengiso oluncinci).
Iskripthi esibonelelwa nguGoogle sikrelekrele ukubonisa kuphela ukuba kukho isiphumo seposi, ke amanye amaphepha am akabonisi nto. Ndicinga ukuba ngendibhale 'ukuba ingxelo' ebonise kuphela iziphumo ukuba iphepha lilingana nephepha lokukhangela. Nangona kunjalo, khange ndizikhathaze kuba ayizukubonisa enye indlela. Ndicinga ukuba yinto encinci yokuqhekeka kwaye ayilunganga, kodwa ayenzakalisi nto.
Inyathelo lam elilandelayo yayikukuqinisekisa ukuba akukho bakhuphiswano kumqeshi wam ababonayo kwiziphumo zophando! Ndiyathemba ukuba ndizifumene zonke!
Iitweaks: Ukufudukela kwifomathi ebanzi
Amaphephandaba kufuneka acinge…